नेकपाको कार्यदलले के गर्छ ? जनार्दन शर्मा यसो भन्छन् | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more नेकपाको कार्यदलले के गर्छ ? जनार्दन शर्मा यसो भन्छन्
नेकपाको कार्यदलले के गर्छ ? जनार्दन शर्मा यसो भन्छन्	दुई–तीनभित्रै प्रस्ताव तयार पार्न सकिन्छ
साउन ३१ गते, २०७७ - १०:००
पक्ष–विपक्ष होइन, दुई अध्यक्ष विधानको व्यवस्था भएकाले उहाँहरू संस्था हो । त्यसभन्दा तल सचिवालय छ, त्यहाँ पनि छलफल हुन्छ । स्थायी कमिटीमा छलफल हुन्छ ।
पार्टीमा देखिएको समस्या समाधानको प्रस्ताव तयार गर्न तपाईंसहित ६ सदस्यीय कार्यदल बनेको छ । कार्यदलले कहिलेबाट काम सुरु गर्छ ?
शनिबारबाटै काम सुरु गर्छौँ । अपराह्न साढे १२ बजे कार्यदलको पहिलो बैठक डाकिएको छ ।
के–के विषयमा गृहकार्यको म्यान्डेट छ ?
म्यान्डेट तोकिएकै चाहिँ छैन । पार्टीका आन्तरिक जीवनमा पैदा भएका समस्या तत्काल र दीर्घकालसम्म कसरी समाधान गर्ने, महाधिवेशनसम्म कसरी जाने, सरकार र पार्टीको कामलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, एकताको काम कसरी सक्ने भन्नेलगायतमा छलफल गरेर प्रस्ताव तयार पार्ने काम कार्यदलले गर्नेछ । त्यसपछि अब बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने भन्ने छ ।
दुई अध्यक्षबीच लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको थियो । तपाईं पनि उहाँहरूलाई मिलाउन सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू अहिले आएर कार्यदल बनाएर समस्या समाधान गर्ने निष्कर्षमा कसरी पुग्नुभो ?
त्यसबारेमा हामीले निरन्तर उहाँहरूसँग बेग्लाबेग्लै छलफल गर्‍यौँ । सामूहिक रूपमा पनि बसेर छलफल भयो । पार्टी एकताको विकल्प छैन । आमजनता, आमकार्यकर्ताको सन्देश यस्तो छ है भनेर हामीले उहाँहरूलाई भन्यौँ । हुन त यी सबै विषयमा उहाँहरूलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ, थियो । अरू नेताहरूको कुरा के हो, हाम्रो कुरा के हो, त्यो पनि भन्यौँ । उहाँहरू (दुवै अध्यक्ष) पनि आ–आफ्नो ढंगले केही समय त चल्नुभो । यसबीचमा उहाँहरूले पनि महसुस गर्नुभयो होला । वास्तवमा कार्यदल गठन आमकार्यकर्ता, जनताको भावना र उहाँहरूको पनि एकताको भावनाको मेल हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
नेकपाभित्र दुई अध्यक्षबीच मेलमिलाप हुनेबित्तिकै अर्को एउटा पक्षले आशंका गर्ने अवस्था छ । त्यसलाई समेत ध्यान कसरी दिनुहुन्छ ?
पक्ष–विपक्ष होइन, दुई अध्यक्ष विधानको व्यवस्था भएकाले उहाँहरू संस्था हो । त्यसभन्दा तल सचिवालय छ, त्यहाँ पनि छलफल हुन्छ । स्थायी कमिटीमा छलफल हुन्छ । त्यसकारण आमछलफल गरेर समग्र पार्टीलाई एकीकृत गर्ने गरी नै जाने हो ।
पछिल्लो समय समस्याको समग्र समाधान महाधिवेशनबाटै गर्ने भन्ने छलफल भएको बाहिर आएको थियो । कार्यदलले यसमा के गर्छ ?
महाधिवेशन त केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरिसकेको छ । त्यो निर्णयअनुसार महाधिवेशनका लागि आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने होला । आवश्यक तयारीको प्रस्तावबारे पनि छलफल गर्छौँ । मेरो व्यक्तिगत विचार भन्ने हो भने पार्टीभित्र विधि–पद्धतिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पनि छलफल गरौँला । सरकारलाई व्यवस्थित गर्ने, यसबीचमा भएका घटनाक्रमले जनतामा के प्रभाव पार्‍यो भन्ने कुरामा पनि छलफल गरौँला । यिनै कुरा गरेर तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधान खोज्ने हो ।
कार्यदलले कति दिनभित्र प्रस्ताव तयार पार्छ होला ?
दुई–तीनभित्रै प्रस्ताव तयार पार्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । तर, शनिबार पहिलो बैठक बसेपछि कति दिनमा कसरी गर्ने तय गर्छौँ ।
साउन ३१ गते, २०७७ - १०:०० मा प्रकाशित